Okwu Mmalite na Echiche na Mbibi - Okwu Foundation
Echiche na Mbibi
Nwoke na Nwanyi na Nwa
Ndi ochichi onye kwuo uche ya bu ochichi onwe onye
Masonry na akara ya
Oge na enyi
Okwu Mmalite na Echiche na Mbibi
Isi nke M nke ỊCHỤRỤ NA MGBE
Isi nke mbu nke Echiche na Mbibi ezubere ime ka ị mata nanị ole na ole n’ime ihe ndị akwụkwọ ahụ kwuru banyere ha. Ọtụtụ n'ime isiokwu ahụ ga-eyi ihe ijuanya. Offọdụ n’ime ha nwere ike ịtụ ụjọ. I nwere ike ịchọpụta na ha niile na-agba ume ichebara echiche echebara echiche. Ka ị maara echiche a, ma chee ụzọ ị ga-esi na akwụkwọ a, ị ga - achọpụta na ọ na - apụtawanye nke ọma, na ị nọ n'etolite nghọta nke ụfọdụ ihe omimi dị omimi nke ndụ - ma gbasara onwe gị .
Akwụkwọ ahụ kọwara nzube nke ndụ. Nzube ahụ abụghị nanị iji nweta obi ụtọ, ma ọ bụ ebe a ma ọ bụ n'ọdịnihu. O bughikwa “izoputa” nkpuru obi mmadu. Ezigbo ebumnuche nke ndụ, ebumnuche nke ga-eju afọ na echiche, bụ nke a: na onye ọ bụla n'ime anyị ga-eji nwayọ nwayọ na-arụ ọkwa dị elu karịa ka ọ ga-adị; nke ahụ bụ, ịmara nke okike, na n'ime na site na ọdịdị. Site na okike pụtara ihe niile mmadụ nwere ike ime site na uche ya.
Akwụkwọ ahụ na-emekwa ka ị mata onwe gị. Ọ na-ewetara gị ozi banyere onwe gị: ihe omimi gị nke bi n’ime ahụ gị. Ikekwe ị na-achọpụta onwe gị mgbe niile na dịka ahụ gị; na mgbe ị na-agbalị na-eche banyere onwe gị ị na ya mere na-eche nke gị na-arụ usoro. Site n'ike omume ị kwuola banyere ahụ gị dị ka "M", dị ka "onwe m". Mara gị iji okwu ndị dị ka "mgbe a mụrụ m," na "mgbe m nwụrụ"; na "Ahụrụ m onwe m na iko ahụ," na "m zuru ike," "Egburu m onwe m," na na, mgbe n'ezie ọ bụ ahụ gị ka ị na-ekwu maka ya. Iji ghọta ihe ị bụ, ị ga-ebu ụzọ hụ ihe dị iche n'etiti onwe gị na ahụ gị bi. Eziokwu ahụ bụ na ị na-eji okwu ahụ bụ "ahụ m" eme ihe ngwa ngwa dịka ị na-eji nke ọ bụla n'ime ndị ahụ e hotara, ga-egosi na ị kwadobebeghị kpamkpam. ime ka odi iche a di nkpa.
I kwesịrị ịma na ị bụghị ahụ gị; ị kwesịrị ịmara na ahụ gị abụghị gị. I kwesịrị ịma nke a n'ihi na, mgbe ị na-eche banyere ya, ị ghọtara na ahụ gị dị nnọọ iche taa site na mgbe ọ bụ, mgbe ị bụ nwata, ị maara nke a ozugbo. N'ime afọ ndị ị dịrị ndụ n'ime ahụ gị, ị maara na ọ nọ na-agbanwe agbanwe: mgbe ọ na-agafe n'oge ọ bụ nwata na oge ntorobịa na ntorobịa, na ọnọdụ ya ugbu a, ọ gbanwere nke ukwuu. Ị ghọtara na dịka ahụ gị dị na ya, emeela ka ọ gbanwee n 'ihu nke ụwa na àgwà gị banyere ndụ. Ma n'oge mgbanwe ndị a, ị nọgidere na ị: ya bụ, ị maara onwe gị dịka otu onye ahụ, ụdị m, n'oge niile. Ntughari uche gị n'eziokwu a dị mfe na-eme ka ị ghọta na ị bụghi na enweghị ike ịbụ ahụ gị; kama nke ahụ, ahụ gị bụ akụkụ ahụ nke ị na-ebi na ya; usoro ihe omumu nke i na aru; anụmanụ nke ị na-agbalị ịghọta, ịzụ na nna ukwu.
Know ma ka aru gị siri bata n’ụwa a; ma olee otú i si bata n’ahụ́ gị, ị maghị. Bataghị n'ime ya ruo mgbe oge ụfọdụ gasịrị mgbe a mụsịrị ya; otu afọ, ikekwe, ma ọ bụ ọtụtụ afọ; ma na nke a ị maghị ntakịrị ma-ọbụ ihe ọbụla, n’ihi na ncheta nke ahụ gị malitere nanị mgbe ị batara n’ime ahụ gị. Know maara ihe banyere ihe anụ ahụ gị na-agbanwe agbanwe na-emejupụta; ma ihe bụ na ị bụ ka ị na-amaghị; ị mabeghị dị ka ihe ị bụ n’ahụ́ gị. Ma aha eji eme ka ahu gi di iche na ahu ndi ozo; ma nke a ka ị mụtara iche n’echiche dịka aha gị. Ihe dị mkpa bụ, ka ị ghara ịma ụdị onye ị bụ, kama ihe ị bụ dị ka onye ọ bụla - mara onwe gị, mana amatabeghị onwe gị, njirimara na-emebi emebi. Know mara na ahụ gị dị ndụ, ị na-atụ anya n'ụzọ ziri ezi na ọ ga-anwụ; n’ihi na ọ bụ eziokwu na anụ ahụ niile dị ndụ na-anwụ n’oge. Ahụ gị nwere mmalite, ma ọ ga-enwe njedebe; na site na mbido rue na njedebe ọ na-edo onwe ya n'okpuru iwu nke ụwa nke phenomena, mgbanwe, oge. Otú ọ dị, ị nọghị n'otu ụzọ ahụ n'okpuru iwu na-emetụta ahụ gị. Ọ bụ ezie na ahụ gị na-agbanwe ihe mejupụtara ya ugboro ugboro karịa ka ị na-agbanwe ejiji ị jiri yikwasị ya, njirimara gị adịghị agbanwe agbanwe. Are bụ otu ihe ahụ ka ị.
Ka ị na-atụgharị uche n'eziokwu ndị a, ịchọtara nke a, ma, ị nwere ike ịnwale, ị gaghị eche na onwe gị ga-abịa ná njedebe, karịa ị nwere ike iche na gị onwe gị nwere mmalite. Nke a bụ n'ihi na njirimara gị bụ mmalite na enweghị njedebe; ezi m, Onwe gị, ị na-eche, adịghị anwụ anwụ na enweghị agbanwe, ruo mgbe ebighị ebi karịa mgbanwe nke mgbanwe, oge, ọnwụ. Ma ihe nke a bụ ihe omimi gị, ị maghị.
Mgbe ị jụrụ onwe gị, "Gịnị ka m maara na m bụ?" ọnụnọ nke njirimara gị ga - emesị mee ka ị zaa n'ụzọ ụfọdụ dị ka nke a: "Ihe ọ bụla ọ bụ na m bụ, amaara m na ọ dịkarịa ala, m maara; N'ịga n'ihu n'eziokwu a ị nwere ike ịsị: "Ya mere amaara m na ọ bụ m. Amaara m, ọzọ, na m bụ; na abụghị m onye ọzọ. Amaara m na nke a bụ njirimara m maara - ụdị ọrụ a dị iche na mmụọ nke m na-eche nke ọma - anaghị agbanwe agbanwe n'oge ndụ m niile, agbanyeghị na ihe ọ bụla ọzọ m maara dị ka ihe nọ n'ọnọdụ mgbanwe oge niile. " Site na nke a ị nwere ike ịsị: "Amabeghị m ihe omimi a na-agbanwe agbanwe m bụ; mana amam na na n'ime ahụ mmadụ a, nke m maara banyere ya n'oge m na-eteta, enwere ihe maara; ihe na-eche na ochicho na iche echiche, mana nke a agbanweghi; a maara ihe na-acho ma na-akpali aru a ka o mee ihe, ma o doro anya na o bughi aru. O doro anya na ihe omuma a, ihe obula o bu, mu onwe m.
Ya mere, site na iche echiche, ị na-ele onwe gị anya dị ka ahụ nke na-ebu aha na ụfọdụ ihe ndị ọzọ dị iche iche, mana dị ka onye maara onwe ya n'ime ahụ. A na-akpọ onye na-ahụ onwe ya n'anụ ahụ, n'ime akwụkwọ a, onye na-eme ya na-ahụ. Onye na-arụ ọrụ n'ime-ahụ bụ isiokwu nke akwụkwọ ahụ kacha echegbu ya. Ya mere, ị ga-ahụ ya aka, ka ị na-agụ akwụkwọ ahụ, iji chee onwe gị dị ka onye na-arụ ọrụ; ile onwe gi anya dị ka onye na-adịghị anwụ anwụ n'ime anụ ahụ. Ka ị na-amụta iche echiche n'onwe gị dị ka onye na-eme ya, dịka onye na-eme gị n'ime ahụ gị, ị ga-eme ihe dị mkpa iji ghọta ihe omimi nke onwe gị na nke ndị ọzọ.
Ị maara banyere ahụ gị, na ihe ọ bụla ọzọ nke sitere n'okike, site na uche. Ọ bụ naanị site na ahụ gị ghọta na ị nwere ike ịrụ ọrụ na ụwa nkịtị. Ị na-arụ ọrụ site n'iche echiche. Echiche gị na ọchịchọ gị kpaliri gị. Mmetụta na ọchịchọ na iche echiche gị na-apụta ìhè mgbe niile; arụ ọrụ nkịtị bụ nanị okwu ahụ, ntụgharị, nke ọrụ gị. Ahụ gị nwere uche ziri ezi bụ ngwá, usoro, nke mmetụta na ọchịchọ gị na-akpali; ọ bụ igwe gị.
Uche unu bụ ihe dị ndụ; akụkụ a na-adịghị ahụ anya nke ọdịdị-ihe; ndị a na-amalite ike na-emetụta akụkụ nile nke ahụ gị; ha bụ ụlọ ọrụ nke, ọ bụ ezie na ha enweghị ọgụgụ isi, maara ihe dịka ọrụ ha. Uche gị dị ka ebe etiti, ihe ntụgharị nke mmetụta n'etiti ihe okike na igwe mmadụ ị na-arụ. Uche a bụ ndị nnọchi anya agwa n'ụlọ ikpe gị. Ahụ gị na uche ya enweghị ikike ịrụ ọrụ afọ ofufo; ọ bụghị naanị ogwe aka gị nke ị nwere ike isi nwee mmetụta na ime ihe. Kama nke ahụ, ike ahụ bụ gị, onye ọrụ, onye maara ihe, onye na-eme ihe.
Ewezuga gị, onye na - eme ya, igwe agaghị enwe ike ịrụzu ihe ọ bụla. Arụ ọrụ na-adịghị arụ nke ahụ gị - ọrụ nke ụlọ, mmezi, mmezi anụ ahụ, na ihe ndị ọzọ - na-arụ ọrụ na-akpaghị aka site na igwe na-eku ume ọ bụla ka ọ na-arụ ọrụ yana yana na nnukwu igwe nke mgbanwe. A na-etinyekarị ọrụ a nke okike na ahụ gị aka, agbanyeghị, site n'echiche gị na-ezighi ezi na nke na-ezighi ezi: arụ na-emebi ma mebie ọrụ ahụ ruo n'ókè nke na ị na-ebute esemokwu ahụ na-ebibi ma na-adịghị edozi ahụ site na ikwe ka mmetụta na ọchịchọ gị mee na-enweghị gị njikwa maara ihe. Ya mere, ka e nwee ike ikwe ka ọdịdị ụwa gị tụgharịa uche na-enweghị nnyonye anya nke echiche na mmetụta uche gị, enyere gị na ị ga-ahapụ ya oge ụfọdụ; ọdịdị dị gị n'ahụ na-enye na njikọ nke na-ejide gị na mmetụta uche ọnụ na-adị jụụ oge ụfọdụ, ọkara ma ọ bụ kpamkpam. Ezumike a ma ọ bụ ịhapụ echiche ziri ezi bụ ụra.
Mgbe ahụ gị na-ehi ụra, ị naghị emetụ ya aka; n'echiche ụfọdụ ị pụọ na ya. Mana oge ọbụla ị tetara ahụ gị, ị ga-amazi onwe gị na ịbụ aha nke m '' bụ na ị nọ tupu ịrahụ ụra n'ahụ gị. Ahụ gị, ma ị tetara ma ọ bụ na-ehi ụra, amaghị ihe ọ bụla, mgbe ọ bụla. Ihe ahụ maara, nke na-eche, ọ bụ gị onwe gị, onye na-eme ihe dị n'ahụ gị. Nke a pụtara ìhè mgbe ị tụlere na ị naghị eche mgbe ahụ gị na-ehi ụra; ma ọ dịkarịa ala, ọ bụrụ na ị na-eche n'oge ụra ị na-amaghị ma ọ bụ cheta, mgbe ị na-akpọte uche gị, ihe ị na-eche.
Sra dị omimi ma ọ bụ nrọ. Nnukwu ụra bụ ọnọdụ nke ị na-adaba n'ime onwe gị, na nke ị na-enweghị mmetụta uche; ọ bụ steeti nke uche na-akwụsị ịrụ ọrụ dị ka nsonaazụ nke ike sitere na ya nke ha na-arụ ọrụ, nke ike bụ gị, onye na-eme ya. Nrọ bụ ọnọdụ nkewapụ akụkụ; ala nke uche gị si na mpụta nke ihe okike wee rụọ ọrụ n'ime okike, na-eme n'ihe gbasara isiokwu nke ihe ndị a na-ahụta n'oge ịmụrụ anya. Mgbe, mgbe oge nke ụra miri emi, ị batara n'ime ahụ gị, ị ga-akpọte uche ozugbo wee malite ịrụ ọrụ site na ha ọzọ dịka onye ọrụ nwere ọgụgụ isi nke igwe gị, na-eche mgbe niile, na-ekwu okwu, na-eme dị ka mmetụta-na- ọchịchọ nke ị bụ. Site na omume niile ị na-ahụ onwe gị ozugbo yana ahụ gị: "Anọ m na-ehi ụra," ị na-ekwu; "ugbu a ka m mụ anya."
Ma na ahụ gị ma na nke gị ahu, alternately edemede na-ehi ụra ụbọchị na ụbọchị; site na ndụ na ọnwụ, na site na steeti mgbe a nwụsịrị; na site na ndụ ruo na ndụ gị niile - njirimara gị na mmetụta gị nke njirimara na-adịgide. Njirimara gị bụ ezigbo ezigbo ihe, ma nọnyere gị mgbe niile; mana ọ bụ ihe omimi nke ọgụgụ isi mmadụ na-apụghị ịghọta. Agbanyeghị na ọgụgụ isi enweghị ike ijide gị, ị ma na ọ dị adị. Are maara ya dị ka mmetụta; ị nwere mmetụta nke njirimara; mmetụta nke I-ness, nke onwe; ị na-eche, na-enweghị ajụjụ ma ọ bụ na-echebara echiche, na ị bụ onye dị iche iche nke na-adịgide ndụ.
Mmetụta nke njirimara nke njirimara gị bụ ihe doro anya na ị gaghị eche na gị na ahụ gị nwere ike ịbụ onye ọzọ karịa gị onwe gị; ị maara na ị bụ otu mgbe ahụ, gị onwe gị, otu onye ahụ. Mgbe ị dinara ahụ gị iji zuru ike ma hie ụra ị gaghị eche na njirimara gị ga-abịa ná njedebe mgbe ị kwụsịrị ijide onwe gị ma hapụkwa ya; ị na-atụ anya na mgbe ị ga-amawanye ahụ gị ma malite ụbọchị ọhụụ na ya, ị ka ga-abụ otu gị, otu onye ahụ, otu onye ahụ.
Dị ka ụra, otú ahụ ka ọnwụ. Ọnwụ bụ ogologo ụra, ogologo oge ezumike nká site na ụwa mmadụ a. Ọ bụrụ na ọ bụ mgbe ị nwụrụ, ị maara na ị na-eche na ị bụ Ịma, nke onwe gị, ị ga-eche n'otu oge ahụ na ogologo ụra nke ọnwụ agaghị emetụta njigide nke njirimara gị karịa ụra ụra na-emetụta ya . Ị ga-eche na site n'ọdịnihu amaghị ihe ị ga-aga n'ihu, ọbụna dịka ị na-aga n'ihu kwa ụbọchị site na ndụ nke na-agwụ. Onye a, nke a, nke ị maara n'oge ndụ gị dị ugbu a, bụ otu onye ahụ, otu gị, nke ahụ makwaara na ị na-aga n'ihu kwa ụbọchị site na ndụ gị ọ bụla.
Ọ bụ ezie na ogologo oge gara aga bụ ihe omimi gị ugbu a, ndụ gị gara aga n'ụwa enweghị ihe karịrị ebube karịa ndụ a dị ugbu a. Kwa ụtụtụ e nwere ihe omimi nke ịlaghachi n'ụra ụra gị site na ị na-amaghị-ebe, ịbanye na ya site na gị-amaghị-esi, na ịmalite ịmara ụwa nke ọmụmụ na ọnwụ na oge. Ma nke a emeela mgbe mgbe, ọ dịwo anya nke ọma, na o yighị ka ọ bụ ihe omimi; ọ bụ ihe a na-ahụkarị. Ma ọ fọrọ nke nta ka ọ dị iche na usoro ị na-agafe mgbe, n'oge mmalite nke ọ bụla dị adị, ị banye n'ime ahụ ọhụrụ nke e mepụtara maka gị site n'ikike, ndị nne na nna gị ma ọ bụ ndị nlekọta kwadebere gị dịka ọhụụ gị obibi n'ime ụwa, ihe nkpuchi ọhụrụ dị ka àgwà.
Ụdị mmadụ bụ onye, ​​ihe nkpuchi, nke onye omee ahụ, onye na-eme ihe, na-ekwu. Ọ bụ ya mere karịa ahụ. Iji bụrụ ụdị mmadụ, a ghaghị ịmụrụ anya site na ọnụnọ nke onye na-eme ya. N'ime ihe nkiri nke ndụ na-agbanwe agbanwe, onye na-eme ya na-agbanye ma na-eyi ụdị mmadụ, na site na ya na-eme ma na-ekwu okwu ka ọ na-arụ ọrụ ya. Dika mmadu si eche echiche onwe ya dika madu; nke ahụ bụ, masquerader na-eche onwe ya dịka akụkụ nke ọ na-arụ, ma na-echezọ onwe ya dị ka onye na-adịghị anwụ anwụ na nkpuchi ahụ.
Okwesiri ighota banyere ịdị adị ọzọ na akara aka, ma ọ bụghị ya, ọ gaghị ekwe omume ịza ajụjụ maka ọdịiche dị na ọdịdị mmadụ. Ikwu na aha nhatanha nke omumu na onodu, nke aku na uba na onodu oria, oria na oria, nke si na mberede ma obu ihe adabaghi ​​bu nnupu isi n'iwu na ikpe ziri ezi. Ọzọkwa, iji kwuo na ọgụgụ isi, ọgụgụ isi, ichepụta ihe, onyinye, ikike, ikike, omume ọma; ma ọ bụ, amaghị ihe, enweghị uche, adịghị ike, sloth, osote, na ịdị ukwuu ma ọ bụ obere nke agwa ndị a, dị ka na-abịa site n'ihe nketa anụ ahụ, na-emegide ezi uche na echiche. Ihe nketa nwere mmewere ahụ; ma a na-eji agwa mmadụ eme echiche ya. Iwu na ikpe ziri ezi na-achị ụwa ọmụmụ na ọnwụ, ma ọ bụghị na ọ gaghị aga n'ihu na usoro ya; iwu na ikpe ziri ezi na-agbasakwa n’ihe omume mmadụ. Mana nsonaazụ anaghị eso ozugbo kpatara ya. Gha mkpụrụ anaghị abịa ozugbo site na owuwe ihe ubi. N’otu aka ahụ, ihe omume ma ọ bụ echiche sitere n’omume nwere ike ọ gaghị apụta ruo mgbe ogologo oge gachara. Anyị enweghị ike ịhụ ihe ga - eme n’etiti echiche na omume na nsonaazụ ha, karịa ka anyị na - enweghị ike ịhụ ihe na - eme n’ime ala n’agbata oge ịgha mkpụrụ na owuwe ihe ubi; ma onye ọ bụla n'ime ahụ mmadụ na-eme iwu nke aka ya dị ka akara aka site n'ihe ọ na-eche na ihe ọ na-eme, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị ama mgbe ọ na-akọwa iwu; na ọ maghị kpọmkwem mgbe ọgwụ ga-ejupụta, dị ka akara aka, ugbu a ma ọ bụ n'ọdịnihu ndụ n'ụwa.
Otu ụbọchị na ndụ anyị niile bụ otu ihe ahụ; ha bụ oge na-aga n'ihu nke ịdị adị na-aga n'ihu nke onye na-eme ihe na-eme ka ọ bụrụ akara aka ya ma dozie akụkọ mmadụ na ndụ. Abali na onwu di kwa nnoo, mgbe ichoro ka ahu gi zuru ike ma hie ura, i gabigara ihe omuma dika nke gi gabigara mgbe itufu aru ma onwu. A ga-atụle nrọ gị n'abalị, ọzọ, tụlee ọnọdụ mgbe ọnwu gasị nke ị na-agabiga mgbe niile: ha abụọ bụ usoro nke omume nke onye na-eme ya; na ma ị na-ebi n'elu gị aza echiche na omume, uche gị ka na-arụ ọrụ na uwa, ma n'ime ime na-ekwu nke okike. Na oge abalị nke ụra miri emi, mgbe uche anaghịzi arụ ọrụ - ọnọdụ nke ichefu echefu nke enweghị ncheta nke ihe ọ bụla - kwekọrọ na oge oghere ị na-eche n'ọnụ ụzọ ụwa nkịtị rue oge ị jikọọ njikọ gị na uche gị na anụ ahụ ọhụrụ: ahụ nwata ahụ ma ọ bụ ahụ nwata nke emere maka gị.
Mgbe ịmalitere ndụ ọhụrụ, ị maara, dịka ọ bụ na ọkụ. Ị na-eche na ị bụ ihe dị iche na nke doro anya. Mmetụta a nke mịbụ maọbụ onwe gị bụ eleghị anya ọ bụ naanị ihe dị adị ị maara maka ogologo oge. Ihe ọzọ bụ ihe omimi. Ruo oge ụfọdụ, ị ga-ama jijiji, ikekwe ọbụna na-ewute gị, site na ahụ ọhụrụ gị na ebe a na-amaghị ama. Mana ka ị na-amụta otú ị ga-esi arụ ọrụ ahụ gị ma jiri uche gị mee ihe, ị na-eji nwayọọ nwayọọ chọpụta onwe gị. Ọzọkwa, mmadụ ndị ọzọ na-azụ gị ka ị chee na ahụ gị bụ onwe gị; eme ka i chee na ị bụ ahụ.
Ya mere, ka ị na-abanyekwu na nchịkwa nke ahụ gị, ị na-adị obere ma na-amaghị na ị bụ ihe dị iche n'anụ ahụ ị na-etinye. Ka ị na-etolite n'oge ị bụ nwata, ị ga-efunahụ ihe ọ bụla na-enweghị ike ịghọta uche gị, ma ọ bụ ịchọta ya n'echiche nke uche; a ga-atụba gị ụlọnga n'ime ụwa nkịtị, ị maara naanị ihe dị ịtụnanya, nke ịgha ụgha. N'okpuru ọnọdụ ndị a, ị bụ ihe omimi nke ndụ gị onwe gị.
Ihe omimi di omimi bu ezigbo Onwe gi - Onye ahu kariri nke adighi na aru gi; ọ bụghị na nke ụwa a nke ọmụmụ na ọnwụ; mana nke, n’amaghị-anwụ anwụ n’ime Ọchịchị Ebighebi nke juru ebe niile, bụ nnọnyere gị n’oge ndụ gị niile, n’ime oke ihi ụra na ọnwụ gị niile.
Mmadu nile na-achọ ihe ga-eju afọ bụ n'ezie ọchịchọ nke ezigbo Onwe ya; njirimara, onwe na I-ness, nke onye ọ bụla maara nke ọma, ma nwee mmetụta na ọchịchọ ịmata. N'ihi ya, a ga-amata ezigbo Onwe ya dị ka ihe ọmụma Onwe, ezigbo ihe mgbaru ọsọ nke mmadụ ịchọ. Ọ bụ ịdịgide adịgide, izu okè, mmezu, nke a na-achọ mana ahụghị ya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọzọkwa, ezigbo Onwe bụ onye ndụmọdụ na onye ọka ikpe na-ekwu okwu n'ime obi dị ka akọnuche na ọrụ, dị ka ihe ziri ezi na ezi uche, dị ka iwu na ikpe ziri ezi - na-enweghị nke mmadụ ga-adị ntakịrị karịa anụmanụ.
E nwere Onye dị otú ahụ. Ọ bụ nke Triune Self, n'ime akwụkwọ a nke a kpọrọ maka na ọ bụ otu ihe a na-adịghị ahụkebe nke atọ n'otu n'otu: nke onye maara ihe, onye na-eche echiche, na onye na-eme ihe. Naanị akụkụ nke onye ọrụ ahụ nwere ike ịbanye n'anụ ahụ ma mee ahụ mmadụ. Akụkụ ahụ bụ ihe a na-akpọ onye ọrụ-na-ahụ. Na mmadu ọ bụla bụ onye na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ bụ otu akụkụ nke ya nke Triune Self, bụ nke dị iche n'etiti ndị ọzọ Triune Selves. Ndị na-eche echiche na ndị maara ihe nke Onye ọ bụla nwere onwe ya nọ n'Ebe Ebighị Ebi, nke bụ Permanence, nke jupụtara ebe a n'ụwa ụwa anyị nke mmadụ na ọnwụ na oge. Onye na-arụ ọrụ na-achịkwa uche na ahụ; ya mere ọ gaghị enwe ike ịmara eziokwu nke onye na-eche echiche na ndị maara ihe na nke atọ ya. Ọ na-efu ha; ihe nke uche na-ekpuchi ya, ahụ nke anụ ahụ na-ejide ya. Ọ naghị ahụ anya karịa ụdị ebumnobi; ọ na-atụ egwu ịhapụ onwe ya pụọ ​​n'anụ ahụ, ma guzoro naanị ya. Mgbe onye na-arụ ọrụ na-egosipụta na ọ dị njikere ma dị njikere ịkwụsị ịchọta nke echiche efu, onye na-eche echiche na onye maara ya na-adị njikere mgbe nile iji nye ya Ìhè na ụzọ Ọmụma onwe onye. Ma onye na-arụ ọrụ na-achọ onye na-eche echiche na onye maara ihe na-ele anya n'ala ọzọ. Ịmara, ma ọ bụ ezigbo Onwe, abụwo ihe omimi na iche echiche ụmụ mmadụ na mmepe ọ bụla.
Plato, ikekwe onye a kacha mara amara na onye nnọchianya nke ndị ọkà ihe ọmụma nke Gris, ji bụrụ ụkpụrụ maka ụmụazụ ya na ụlọ akwụkwọ nkà ihe ọmụma ya, Academy: "Mara onwe gị" - gnothi seauton. Site na ihe odide ya ọ gasi na ọ nwere nghọta banyere ezigbo Onwe, n’agbanyeghi na onweghi otu mkpụrụ okwu o jiri mee ihe n’asụsụ bekee dị ka ihe ọbụla zuru oke karịa “mkpụrụ obi”. Plato jiri usoro ịjụ ase gbasara ịchọta ezigbo Onwe ya. E nwere oke nka na nrigbu nke ndi odide ya; n'ichepụta mmetụta ya dị egwu. Usoro ya nke dialectics dị mfe ma dịkwa omimi. Onye na - agụ umengwụ n’uche, onye ga - anabata obi ụtọ karịa ịmụ ihe, o yikarịrị ka ọ ga - eche echiche. O doro anya na usoro olu ya bụ ịzụ uche, inwe ike ịgbaso usoro ntụgharị uche, na ichefughị ​​ajụjụ na azịza na mkparịta ụka ahụ; onye ọzọ agaghị enwe ike ikpebi nkwubi okwu ruru na arụmụka ahụ. N’ezie, Plato ebughị n’obi iweta ọtụtụ ihe onye a na-amụrụ ihe. O yikarịrị ka ọ bu n'obi ịdọ aka ná ntị n'uche, ka ọ bụrụ na site n'echiche nke onwe ya, ọ ga-enweta ihe ọmụma ma duga n'amata isiokwu ya. Nke a, Socratic usoro, bụ a dialectical usoro ọgụgụ isi ajụjụ na azịza nke ma ọ bụrụ na ịgbaso ga-enyere mmadụ aka ịmụta otú e si eche echiche; na n’ịzụ uche ka mmadụ chee echiche nke ọma Plato emeela karịa otu onye nkuzi ọ bụla ọzọ. Ma odighi odide obula biakutere ayi nke o ji kwu ihe uche bu, ma obu ihe uche di; ma ọ bụ ihe ezigbo Onwe ya bụ, ma ọ bụ ụzọ esi amata ya. Onye aghaghi ile anya.
A chịkọtara nkuzi oge ochie nke India na nkwupụta nzuzo: "nke ahụ bụ gị" (tat tvam asi). Ozizi a emeghi ka o doo anya ihe “ihe” bu ma obu ihe “gi” bu; ma ọ bụ olee otu jikọrọ "na" na "gị", ma ọ bụ otu esi amata ha. Ma ọ bụrụ na okwu ndị a ga-enwe isi, ekwesịrị ịkọwa ya n'ụzọ kwere nghọta. Ihe omuma nke ihe omuma nile nke India - ile anya nke oma banyere ulo akwukwo ndi isi - odi ka obu na madu nwere ihe nadigh anwu anwu nke bu ma buru onye obula nke ihe mejuputara ma obu ihe zuru uwa. nke oké osimiri mmiri bụ akụkụ nke oké osimiri, ma ọ bụ dị ka a ebua bụ otu na ire ọkụ na nke ọ malitere na ya; na, na n'ihu, na onye a ihe, nke a bụ onye mepụtara - ma ọ bụ, dịka a na-akpọ ya n'ụlọ akwụkwọ ndị isi, atman, ma ọ bụ purusha, - bụ nkewapụrụ site na ihe ụwa niile naanị site na mkpuchi nke echiche efu, maya , nke na-eme ka onye na-eme ihe n'ime mmadụ na-eche na ọ dị iche na dị ka onye ọ bụla; ebe, ndị nkuzi na-ekwupụta, enweghị onwe dị iche na ewezuga ihe ụwa niile, akpọrọ Brahman.
Ozizi bu, na ozo, na iberibe uzo nke Brahman nke uwa nile no n’okpuru ndu mmadu na ntaramahụhụ dakwasiri ya, amagh ihe ha chere bu onye ha na Brahman nke uwa nile; ejikọtara na wiil nke ọmụmụ na ọnwụ na ndaghari na okike, rue mgbe, mgbe afọ ole na ole gachara, mpekere niile nke nta nke nta ga-adịghachi n'otu na Brahman eluigwe na ala. A kọwaghị ihe kpatara ya ma ọ bụ mkpa ọ dị ma ọ bụ ihe ịchọrọ Brahman site na usoro a dị egwu ma na-egbu mgbu dị ka iberibe ma ọ bụ ọdịda. E gosipụtaghị otu Brahman zuru ụwa ọnụ zuru oke ma ọ bụ nwee ike irite uru na ya; ma ọ bụ otú otu n'ime iberibe akwụkwọ ya si erite uru; ma ọ bụ otu esi enweta uru. Ndụ dum nke mmadụ dị ka ọ ga-abụ ihe mmekpa ahụ na-enweghị isi na-enweghị isi na ihe kpatara ya.
Ka o sina dị, a gosipụtara ụzọ nke onye ruru eru tozuru oke, na-achọ "ịnọpụ iche," ma ọ bụ "nnwere onwe" pụọ n'agbụ nke uche ugbu a na okike, site na mbọ dị egwu ga-ewepu mmụọ ahụ, ma ọ bụ echiche okike, wee gaa n'ihu izugbe site na okike. Ekwere na nnwere onwe, site na omume yoga; n'ihi na a na-ekwu na site na yoga, echiche ahụ nwere ike ịdọ aka ná ntị nke na atman, purusha - onye mejupụtara - mụta igbochi ma ọ bụ mebie mmetụta ya na agụụ ya, na-agbagha echiche efu nke echiche ya eri ogologo oge. ; si otú a tọhapụ ya site na mkpa ọ dị ịdị adị nke mmadụ ọzọ, emesiri weghachi ya n'ime Brahman eluigwe na ala.
N'ime ihe ndị a niile, e nwere vestig eziokwu, ya mere nke ukwuu. Yoga na-amụta n'ezie ịchịkwa ahụ ya na ịdọ aka ná ntị mmetụta na ọchịchọ ya. Ọ nwere ike mụta ịchịkwa uche ya ruo n'ókè ebe ọ nwere ike, n'ọchịchọ, mara ọnọdụ nke ihe dị n'ime ndị na-ahụkarị nke uche mmadụ na-azụghị, wee si otu a nwee ike ịme nchọpụta na ịmatakwu steeti nke okike ihe omimi nye otutu mmadu. Ọzọkwa, ọ pụrụ ịchịkwa ikike ụfọdụ nke okike. Ihe a nile doro anya na-eme ka mmadụ dị iche na nnukwu ndị na-emeghị iwu. Mana ọ bụ ezie na usoro yoga pụtara na "ịtọhapụ," ma ọ bụ "iwepu onwe ya," mmụọ nke onwe ya na echiche efu nke uche, ọ dị ka ọ doro anya na ọ dịghị mgbe ọ na-eduga mmadụ n'ofè ọdịdị nke okike. Nke a bu ihe putara ihe site na nghotahie banyere uche.
Uche nke a na-azụ na yoga bụ uche uche, ọgụgụ isi. Ọ bụ ngwá ọrụ pụrụ iche nke onye ọrụ ahụ nke akọwapụtara na peeji ndị ọzọ dịka uche anụ ahụ, ebe a dị iche iche site na uche abụọ ndị ọzọ na-adịbeghị iche: uche maka mmetụta na ọchịchọ onye ahụ. Uche uche bụ nanị ụzọ nke onye na-eme ihe nwere ike isi rụọ ọrụ site n'echiche ya. Ọrụ nke uche uche na-ejedebe n'ụzọ doro anya na uche, ya mere n'ụzọ doro anya na okike. Site na ya, mmadụ maara eluigwe na ụwa na akụkụ ya dị ịrịba ama: ụwa nke oge, nke mgbaasị. Ya mere, ọ bụ ezie na onye na-eso ụzọ na-eme ka ọgụgụ isi ya dị elu, ọ bụ n'otu oge ahụ na-egosi na ọ ka na-adabere na uche ya, ka na-etinyekwa aka n'anụ ahụ, a dịghị ahapụ ya pụọ ​​na mkpa nke ịnọgide na-adị n'ime ahụ mmadụ. Na nkenke, ma onye omept nwere ike ịbụ onye ọrụ nke igwe ya, ọ pụghị ịhapụ ma ọ bụ tọhapụ onwe ya site na okike, enweghị ike ịmara onwe ya ma ọ bụ nke onwe ya, site na iche echiche ya; n'ihi na ihe ndị dị otú ahụ bụ ihe omimi mgbe nile maka ọgụgụ isi, a pụkwara ịghọta ya nanị site na iji ọrụ uche na-arụkọ ọrụ nke uche-uche na uche nke mmetụta na ọchịchọ.
O yighi ka eburu n'uche mmetụta na agụụ ọ bụla n'usoro echiche nke Ọwụwa Anyanwụ. Ihe akaebe nke a bụ ihe a hụrụ n’akwụkwọ anọ nke Patanjali’s Yoga Aphorisms, yana n’akwụkwọ dịgasị iche iche gbasara ọrụ mgbe ochie ahụ. Patanjali bụ onye a kacha kwanyere ugwu na onye nnọchi anya ndị ọkà ihe ọmụma India. Ihe odide ya miri emi. Mana odi ka odi na ezi nkuzi ya efuola ma obu zobe ya; maka sutra ahu eji aghugho nke edere aha ya ga-adi ka o gaghi emechu ya ihu ma obu meghe ya ebum n’uche ha bu n’obi. Otú a ga-esi nwee nsogbu dị otú ahụ na-enweghị isi na narị afọ gara aga bụ nke a ga-akọwa naanị n'iburu n'uche ihe edepụtara n'isiakwụkwọ a na nke na-esote banyere mmetụta na ọchịchọ n'ime mmadụ.
Nkụzi nke Ọwụwa Anyanwụ, dị ka nkà ihe ọmụma ndị ọzọ, na-eche banyere ihe omimi nke ịmara onwe gị na ahụ mmadụ, na ihe omimi nke njikọ dị n'etiti onye ahụ na ahụ ya, na okike, na eluigwe na ụwa dum. Ma ndi nkuzi nke India egosighi na ha maara ihe onye a maara onwe ya - atman, purusha, onye mejuputara onwe ya - bu, dika onye puru iche site na okike: o dighi ihe putara ihe di iche n'etiti onye mebe aru na ahụ nke bụ nke okike. O doro anya na enweghị ike ịhụ ma ọ bụ igosipụta ọdịiche a bụ n'ihi nghọtahie zuru ụwa ọnụ ma ọ bụ nghọtahie nke mmetụta na ọchịchọ. Ọ dị mkpa ka a kọwaa mmetụta na ọchịchọ n'akụkụ a.
Ịtụle mmetụta na ọchịchọ na-ewebata otu n'ime isiokwu ndị kachasị mkpa na nke dị oke na-akọwapụta n'akwụkwọ a. Enweghi ike imeri ya na uru ya. Ịghọta na iji mmetụta na ọchịchọ nwere ike ịpụta ntụgharị ọganihu na ọganihu nke mmadụ na Humanity; ọ nwere ike ịtọhapụ ndị na-eme echiche ụgha, nkwenkwe ụgha, ihe mgbaru ọsọ ụgha, nke ha ji etinye onwe ha n'ọchịchịrị. Ọ na-ekpughe nkwenkwe ụgha nke a nabatara n'oge na-adịghị anya; nkwenkwe nke na-agbanye mkpọrọgwụ ugbu a n'echiche ụmụ mmadụ nke o doro anya na ọ dịghị onye chere na ịjụ ya.
Ọ bụ nke a: A kuziere onye ọ bụla ikwenye na uche nke ahụ bụ ọnụ ọgụgụ ise, na mmetụta ahụ bụ otu n'ime uche ziri ezi. Mmetụta uche, dịka e kwuru n'akwụkwọ a, bụ nkeji nke okike, ndị elementrị, maara ihe dịka ọrụ ha mana enweghị ọgụgụ isi. E nwere naanị uche anọ: anya, ịnụ, uto, na isi; na maka uche ọ bụla nwere akụkụ pụrụ iche; mana onweghị akụkụ pụrụ iche maka inwe mmetụta n'ihi na mmetụta - ọ bụ ezie na ọ na-adị site na ahụ - abụghị nke ahụ, ọ bụghị nke okike. Ọ bụ otu n'ime akụkụ abụọ nke onye na-eme ya. Immụ anụmanụ nwekwara mmetụta na ọchịchọ, mana anụmanụ bụ mgbanwe sitere na mmadụ, dịka akọwara ya n'oge na-adịghị anya.
A ghaghị ikwu otu ihe banyere ọchịchọ, akụkụ nke ọzọ nke onye ọrụ ahụ. Mmetụta na ọchịchọ aghaghị ịdị na-atụle ya mgbe niile, n'ihi na ha enweghị ike ịgụta ọnụ; enweghịkwa ike ịdị n'enweghị nke ọzọ; ha dị ka mkpanaka abụọ nke eletrik, akụkụ abụọ nke mkpụrụ ego. Ya mere, akwụkwọ a na-eji okwu ahụ eme ihe: mmetụta na-ọchịchọ.
Ọchịchọ na-achọ onye na-eme ya bụ ike nwere ọgụgụ isi site na nke ebumpụta ụwa na mmetụta uche. Ọ bụ n'ime ike okike nke dị n'ebe nile; enweghị ya ndụ niile ga-akwụsị. Mmetụta na ọchịchọ bụ nkà na-enweghị njedebe na-enweghị njedebe site na nke a na-aghọta ihe nile, tụpụta ime, kpụrụ, mpụta, na ịchịkwa, ma ọ bụ site n'aka ndị ọrụ na ahụ mmadụ ma ọ bụ ndị sitere na Gọọmentị nke ụwa, ma ọ bụ nke nnukwu ọgụgụ isi. Mmetụta na ọchịchọ bụ n'ime ọrụ ọgụgụ isi nile.
N'ime ahụ mmadụ, mmetụta na ọchịchọ bụ ikike maara nke na-arụ ọrụ igwe mmadụ ọ bụla. Ọ bụghị otu n'ime uche anọ - na-eche. Mmetụta, akụkụ nke onye na-eme ihe, bụ na ahụ nke na-eche, nke na-eche ahụ ma na-enwe mmetụta a na-ebugharị na ahụ site na mmetụta anọ, dị ka mmetụta. Ọzọkwa, ọ nwere ike na ọkwa dịgasị iche ịghọta echiche ndị na-enweghị isi, dịka ọnọdụ, ikuku, ibu amụma; ọ nwere ike ịnụ ihe ziri ezi na ihe bụ ihe ọjọọ, ma nwee ike ịnata ịdọ aka na ntị nke akọ na uche. Ọchịchọ, ihe dị mkpa, bụ ikike dị omimi nke na - emegharị ahụ n'imezu nzube nke onye na - eme ya. Onye na-eme ya na-arụ ọrụ n'otu oge na akụkụ ya abụọ: yabụ ọchịchọ ọ bụla na-esite na mmetụta, mmetụta ọ bụla na-eme ka agụụ nwee.
Ị ga-ewere nzọụkwụ dị mkpa n'ụzọ ị ga-esi mara ihe ị maara banyere onwe gị na ahụ mgbe ị na-eche onwe gị dị ka ọgụgụ isi nke na-egosi site na ụzụ nchepụta onwe gị, dịka iche na ahụ nke ị na-eche, ma n'otu oge ahụ dịka ike ahụ nke ọchịchọ nke na-agbanye n'ọbara gị, ma nke na-abụghị ọbara. Mmetụta na ọchịchọ ga-ejikọta uche anọ. Nghọta nke ebe na ọrụ nke inwe mmetụta na ọchịchọ bụ isi nke ịhapụ nkwenkwe nke ọtụtụ afọ mere ka ndị na-eme mmadụ wee chee onwe ha dị ka ndị mmadụ. N'iji nghọta a banyere inwe mmetụta na ọchịchọ n'ime mmadụ, a pụrụ iji nkà mmụta sayensị nke India nọgide na-enwe ekele ọhụrụ.
Nkuzi nke owuwa anyanwu ghotara na ka madu we nweta ihe omuma banyere onwe ya nke di na aru, aghagh inapu onye ozo site na echiche nke uche, ya na echiche ugha na omume nke ghitaputa na odida onye obula ichikota echiche na ochicho nke aka ya. . Mana ọ gafere echiche ụwa niile na-eche na inwe mmetụta bụ otu n'ime mmetụta nke ahụ. N’ụzọ megidere nke ahụ, ndị nkuzi kwuru na mmetụ ma ọ bụ mmetụta bụ nke ise; ọchịchọ ahụ bụkwa nke ahụ; nakwa na ma mmetụta ma ọchịchọ bụ ihe okike na ahụ. Site na nkwupụta a, a na-arụ ụka na purusha, ma ọ bụ atman - onye mejupụtara ya, mmetụta na ọchịchọ - ga-ebelata mmetụta kpamkpam, ọ ga-ebibikwa, "gbuo," ọchịchọ.
N'ihe banyere ihe e gosipụtara ebe a gbasara inwe mmetụta na ọchịchọ, ọ ga-adị ka ozizi nke East na-adụ ọdụ na-agaghị ekwe omume. Onye na-adịghị anwụ anwụ na-adịghị anwụ anwụ n'ime ahụ apụghị ibibi onwe ya. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ka ahụ mmadụ na-adị ndụ na-enweghị mmetụta na ọchịchọ, ahụ ga-abụ nanị ikuku iku ume.
Ewezuga nghọtahie ha nwere banyere agụụ na agụụ, ndị nkuzi India anaghị enye ihe akaebe nke inwe ihe ọmụma ma ọ bụ nghọta nke atọ n'ime otu. Na nkwupụta a na-akọwaghị: "ị bụ nke ahụ," ọ ga-abụrịrị na "ị" onye a na-agwa okwu bụ atman, purusha - onye nwere onwe ya; nakwa na “ihe” ahụ ejiri mata “gị” bụ ihe mmadụ niile bụ, Brahman. O nweghi ihe di iche emere n’etiti onye n’eme ya na aru ya; ma n'otu aka ahụ enwere odidi kwekọrọ na ya ịmata ọdịiche dị n'etiti Brahman na ụwa niile. Site na nkuzi nke Brahman n’elu uwa dika isi mmalite na ngwucha nke mmadu nile n’egosiputa, otutu nde ndi n’eme ihe ka edebeere n’enwegh omuma banyere onwe ha; na ọzọ abịawo na-atụ anya, ọbụna na-achọ, ida na eluigwe na ala Brahman na nke bụ ihe kasị oké ọnụ ahịa ihe na onye ọ bụla nwere ike inwe: onye ezigbo njirimara, onye onwe onye dị ukwuu Onwe, n'etiti ndị ọzọ n'otu n'otu na-adịghị anwụ anwụ Selves.
Ọ bụ ezie na o doro anya na nkà mmụta sayensị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ na-eme ka onye ọrụ ahụ jikọtara ya na okike, na n'amaghị ama nke Onwe ya, o yiri ka ọ bụ ezi uche na ọ gaghị ele anya na ozizi ndị a nwere ike ịmalite imeghi ihe; na enwere ike imegide ha n'ebumnuche nke igbochi ndị mmadụ n'eziokwu ahụ, ya mere na edo onwe ha n'okpuru ya. Kama nke ahụ, ọ ga-abụrịrị na ụdị ndị dị ugbu a, ma ọ bụ n'oge ochie ka ha nwere, bụ nanị ihe fọdụrụnụ nke usoro ihe merela agadi nke sitere na ọdịnala na-apụ na nke echefuru echefu: nkuzi nke nwere ike ịbụ ihe na-enye ìhè n'ezie; nke a na-achọpụta na ọ bụ mmetụta-na-ọchịchọ dịka onye na-adịghị anwụ anwụ-n'ime-ahụ; nke ahụ gosipụtara onye ahụ na-eme ụzọ ụzọ ọ ga-esi mata ihe onwe ya. Njirimara n'ozuzu nke ụdị dị ugbu a na-atụ aro ụdị ihe a; na na n'oge ọgbọ, ozizi mbụ a na-ahụghị na ozizi nke Brahman zuru ụwa ọnụ na ozizi ndị na-emegiderịta onwe ha bụ ndị ga-ewepụ mmetụta na ọchịchọ na-adịghị anwụ anwụ dị ka ihe na-adịghị mma.
Enwere akụ nke na - ezobeghi kpamkpam: Bhagavad Gita, ihe kachasị ọnụ ahịa ọla India. Ọ bụ ọla pel India. Eziokwu nke Krishna nyere Arjuna mara mma, mara mma ma na-adịru mgbe ebighị ebi. Ma oge dị anya nke akụkọ ihe mere eme nke edere ma tinye aka na ihe nkiri ahụ, yana nkuzi oge ochie nke Vedic nke ekpuchikwara eziokwu ya, na-eme ka o siere anyị ike ịghọta ihe odide ndị Krishna na Arjuna bụ; otú ha si nwee njikọ na ibe ha; ihe ụlọ ọrụ nke ọ bụla dị na nke ọzọ, n'ime ma ọ bụ pụọ na ahụ. Ozizi na usoro ndị a na-asọpụrụ n'ụzọ zuru oke nwere ọtụtụ ihe ọ pụtara, ọ nwere ike ịba nnukwu uru. Mana agwakọtara ya na ya site na mmụọ mmụta okpukpe mgbe ochie na nkuzi nke Akwụkwọ Nsọ nke na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ pụtara, ọ baghịkwa uru ọ bara n'ezie.
N'ihi enweghị nghọta zuru oke na nkà ihe ọmụma Ọwụwa Anyanwụ, na eziokwu na ọ dị ka ihe na-emegiderịta onwe ya dị ka ihe nduzi maka ịmara onwe gị na ahụ na nke ezigbo Onwe gị, nkuzi oge ochie nke India yiri ka enwere obi abụọ na enweghị ntụkwasị obi . Otu laghachi West.
Banyere Iso Ụzọ Kraịst: Isi mmalite na akụkọ ihe mere eme nke Iso Ụzọ Kraịst enweghị ihe ọ bụla. Akwukwo akwukwo di iche iche abiawo na otutu oge nke mgbawa iji kọwaputa ihe ndi nkuzi bu, ma obu ihe ha bu n'obi. Site na mmalite oge enwere ọtụtụ ozizi nke ozizi; ma ọ dịghị ihe odide ọ bụla rịdatara na-egosi ihe ọmụma nke ihe e bu n'obi ma kụziere na mmalite.
Ilu na okwu ndị dị n’Oziọma ndị ahụ na-agba akaebe banyere ịdị ebube, ịdị mfe, na eziokwu. Ma obuna ndi mbu mbu enyere ha ozi ohuru na ha aghotaghi ya. Akwụkwọ ndị a kapịrị ọnụ, ọ bụghị ka ha duhie; ma n’otu oge ahụ ha na-ekwu na enwere mpụtara nke ime nke bụ maka ndị a họpụtara; ihe nzuzo zubere abụghị maka mmadụ niile kama maka "onye ọbụla ga-ekwere." N’ezie, akwụkwọ ndị ahụ jupụtara n’ihe omimi; ọ ga-abụrịrị na ha kpuchiri ozizi nke mmadụ ole na ole bidoro mara. Nna ahụ, Ọkpara ahụ, Mmụọ Nsọ: ndị a bụ ihe omimi. Ihe omimi bukwara ihe omimi di na omumu na ndu Jisos; otu aka ahu n’obe ya, onwu ya na mbilite n’onwu ya. Ihe omimi di iche iche, n’enweghi obi abua, bu elu igwe na oku ala mo, na ekwensu, na ala eze Chineke; n'ihi na o yikarịrị ka ọ ga-abụ na isiokwu ndị a ka a ga-aghọta n'ihe gbasara uche, kama ịbụ akara. Ọzọkwa, n’akwụkwọ niile, enwere nkebi ahịrịokwu na okwu a na-ekwu n’ụzọ doro anya na a gaghị ewere ya n’ụzọ nkịtị, kama ọ bụ n’ụzọ dị omimi; ma ndị ọzọ nwere ike ịpụta naanị naanị ndị ahọpụtara. Ọzọkwa, ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya iche na ilu na ọrụ ebube nwere ike ịbụ ndị metụtara ya dịka eziokwu nkịtị. Ihe omimi n'ime - mana onweghi ebe ekpughere ihe omimi. Gịnị bụ ihe omimi niile a?
Ebumnuche doro anya nke Oziọma ndị ahụ bụ ịkụziri nghọta na ibi ndụ dị n’ime; ndu ime nke gha eme ka aru mmadu di ohuru ma si otú a merie onwu, weghachite aru nke ndu rue ndu ebighebi, onodu nke esi na ya siri na ya daa - “odida” ya bu “nmehie mbu.” N'otu oge, ọ gharịrị inwe usoro nkuzi doro anya nke ga-eme ka o doo anya etu mmadụ ga-esi bi ụdị ndụ dị n'ime ya: otu mmadụ nwere ike, site na ime nke a, wee mata nke ezigbo Onwe ya. A na-atụ aro ịdị adị nke ozizi nzuzo dị otú ahụ na edemede ndị Kraịst oge mbụ site na ntụnye aka n'ihe nzuzo na ihe omimi. Ọzọkwa o yiri ka o doro anya na ilu ndị ahụ bụ akụkọ ifo, myirịta: akụkọ ime mmụọ na njiri mara nke ikwu okwu, na-eje ozi dị ka ugbo ala maka ibuga ọ bụghị naanị ụkpụrụ omume na nkuzi nke ụkpụrụ omume, kamakwa eziokwu ụfọdụ dị n'ime, ebighi ebi dị ka akụkụ nke usoro nkuzi doro anya. Kaosinadị, Oziọma ndị ahụ, dịka ha siri dị taa, enweghi njikọ ndị a ga-achọ iji mepụta usoro; ihe gbadatara anyị ezughi oke. Na banyere ihe omimi nke e chere na e zoro ụdị nkuzi ndị a, enweghị isi ma ọ bụ koodu amaara ama enyere anyị nke anyị nwere ike imeghe ma ọ bụ kọwaa ha.
Onye puru ikwuputa ozizi mbu nke ayi mara banyere ya bu Pol. Okwu ndị o jiri mee ka ihe ọ pụtara doo anya nye ndị a gwara ha; ma ugbua ọ dị mkpa ịkọwa ihe odide ya n ’usoro nke ụbọchị ugbu a. "Akwụkwọ ozi mbụ nke Pọl nye ndị Kọrịnt," isi nke iri na ise, na-ezo aka ma na-echetara ụfọdụ nkuzi; ntuziaka doro anya banyere ibi nke ndụ ime. Mana ekwesiri iche na ozizi ndi ahu abughi ndi edebere ede - nke gagh adi ka ihe nghota - ma obu na ha furu efu ma obu hapuru ha na ederede ndi gbadara. Na mmemme niile, egosighi "Wayzọ Ahụ".
Ntak emi ẹkenọde akpanikọ emi ẹdude ke ukem n̄kpọ emi? Ihe kpatara ya nwere ike ịbụ na iwu nke oge gbochire mgbasa ozi ọhụrụ. A ghaghị ịnwụ ma ọ bụ ozizi na-ezisa ozi ọma. N'ezie, akụkọ ahụ bụ na Jizọs tara ahụhụ site na obe maka ịkụzi eziokwu na ụzọ na ndụ.
Mana taata, a na-ekwu, enwere nnwere onwe ikwu okwu: mmadụ nwere ike ikwu n'echeghị ọnwụ maka ihe mmadụ kwenyere gbasara ihe omimi nke ndụ. Ihe onye ọ bụla na-eche ma ọ bụ mara banyere iwu na ịrụ ọrụ nke ahụ mmadụ na nke maara onwe ya bi na ya, eziokwu ma ọ bụ echiche nke mmadụ nwere ike inwe gbasara mmekọrịta dị n'etiti onwe ya na ezigbo Onwe ya, yana banyere ụzọ esi enweta ihe ọmụma- -ndị a chọpụtaghị, taa, n'okwu omimi nke chọrọ igodo ma ọ bụ koodu maka nghọta ha. N’oge a, “ihe nzuzo” nile na “ikpu ìsì,” ihe nzuzo nile na “nnabata” n’asụsụ pụrụ iche pụrụ iche, kwesịrị ịbụ ihe akaebe nke amaghị ihe ọ bụla, ịchọ ọdịmma onwe onye, ​​ma ọ bụ azụmahịa a na-asọ oyi.
N'agbanyeghị mmehie na nkewa na sectarianism; n'agbanyeghị ụdị nkọwa dịgasị iche iche nke ozizi ozizi ụgha, Iso Ụzọ Kraịst agbasawo n'akụkụ nile nke ụwa. Eleghị anya karịa okwukwe ọ bụla, ozizi ya enyerelarị ịgbanwe ụwa. A ghaghị inwe eziokwu na nkuzi ndị ahụ, n'agbanyeghị nke a, ha nwere ike zoo, nke, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku afọ abụọ, abatala n'obi ndị mmadụ ma kpalie Humanity n'ime ha.
Eziokwu ebighi ebi dị n'ime Humanity, na Humanity bụ nke zuru oke nke ndị niile na-eme ahụ mmadụ. A pụghị igbochi eziokwu ndị a ma ọ bụ chefuo ya. Na oge ọ bụla, na nkà ihe ọmụma ọ bụla ma ọ bụ okwukwe, eziokwu ga-apụta ma nwetaghachi, n'agbanyeghị ụdị mgbanwe ha.
Otu ụdị nke a tụbara ụfọdụ n'ime eziokwu ndị a bụ Freemasonry. Usoro Masonic dị ochie dịka agbụrụ mmadụ. O nwere ozizi bara nnukwu uru; nke ka ukwuu, n'eziokwu, karịa ndị Masons ahụ bụ ndị na-elekọta ha masịrị ya. Usoro ahụ chebere ihe ọmụma dị oke ọnụ oge ochie banyere iwu nke ahụ ebighi ebi maka onye ma ama na-adịghị anwụ anwụ. Ihe omimi ya di omimi banyere nwughari ulo uka nke ebibiri. Nke a dị oke mkpa. Templelọ nsọ ahụ bụ akara nke ahụ mmadụ nke mmadụ ga-ewughachi, gbanwee ya, ghọọ ahụ nke ga-adịru ebighi ebi, nke na-adịru mgbe ebighi ebi; ahụ nke ga-abụ ebe obibi kwesịrị ekwesị maka onye na-eme mgbe ahụ na-amaghị anwụ. "Okwu ahụ" nke "furu efu" bụ onye na-eme ya, nke furu efu n'ime ahụ mmadụ - mkpọmkpọ ebe nke nnukwu ụlọ nsọ ahụ; ma nke ga - ahụ onwe ya ka ahụ dịghachi ọhụrụ na onye na - eme ya na - achịkwa ya.
Akwụkwọ a ewetara gị Ìhè karịa, ọtụtụ Ìhè n'echiche gị; Ìhè iji chọta “Wayzọ” gị na ndụ. Ìhè nke ọ na-eweta, ọ bụghị ìhè nke okike; ọ bụ Ìhè ọhụrụ; nke ọhụrụ, n’ihi na, ọ bụ ezie na ọ nọwo n’ihu gị, ị maghị ya. Na peeji ndị a na-akpọ ya Conscious Light n'ime; ọ bụ Ìhè ahụ nwere ike igosi gị ihe dị ka ha dị, Ìhè nke ọgụgụ isi nke ị metụtara. Ọ bụ n’ihi ọnụnọ nke Ìhè a ka i nwere ike iche n’ichepụta echiche; echiche iji kekọta gị na ihe okike, ma ọ bụ ịtọhapụ gị na ihe okike, dịka ị họọrọ na uche gị. Ezigbo iche echiche bụ ijide na ilekwasị anya nke Amamịghe na n'ime isiokwu nke echiche. Site n'echiche gị ị na-eme ọdịnihu gị. Echiche ziri ezi bụ ụzọ iji mara onwe gị. Nke ahụ nwere ike igosi gị ụzọ, nke ga - eduga gị n'okporo ụzọ gị, bụ Ìhè nke ọgụgụ isi, Mmata maara nke ọma n'ime. N’isiakwụkwọ ndị nke ọzọ, a gwara ya otu esi eji Light a were nwee ọtụtụ Ìhè.
Akwụkwọ ahụ na-egosi na echiche bụ ihe dị adị, ezigbo ndị mmadụ. Naanị ihe ndị mmadụ na-eme bụ echiche ya. Akwụkwọ ahụ na-egosi usoro uche nke e ji kee echiche; na ọtụtụ echiche na-adịgide adịgide karịa ahụ ma ọ bụ ụbụrụ nke e si kee ya. Ọ na-egosi na echiche ndị mmadụ na-eche bụ ihe ndị nwere ike, akwụkwọ mpịakọta na-acha anụnụ anụnụ, aghụghọ, ụdị nke ọ na-ewuli ihe onwunwe dị egwu nke ọ gbanwere ihu ọdịdị, ma mee ka a kpọọ ya ụzọ ndụ na ya mmepeanya. Echiche bụ echiche ma ọ bụ ụdị nke na-emepe ma mepee ihe ndị mepere emepe. Akwụkwọ ahụ na-akọwa otú echiche ndị a na-adịghị ahụ anya nke mmadụ na-ahụ si dị ka omume na ihe na ihe omume nke ndụ ya na ndụ ya, na-ekepụta ọdịnihu ya site na ndụ mgbe ndụ n'ụwa. Ma ọ na-egosikwa otu mmadụ pụrụ isi mụta iche n'echeghị echiche, ma si otú ahụ na-ejide onwe ya.
Okwu dịka a na-ejikarị eme ihe bụ okwu niile nke a na-etinye iji tinye uche n'echiche niile, n'ụzọ na-enweghị isi. A na-ekwukarị na mmadụ nwere naanị otu uche. N'ezie ezi uche dị iche iche dị iche iche, nke bụ, ụzọ maka iche echiche na Conscious Light, na-eji onye na-arụ ọrụ. Ndị a, ndị a kpọtụrụ aha na mbụ, bụ: uche-uche, echiche-uche, na ọchịchọ uche. Uche bụ ịrụ ọrụ nke ọgụgụ isi. Ya mere, uche anaghị arụ ọrụ n'enweghị onye ọrụ. Ọrụ nke nke ọ bụla n'ime uche atọ dabere na mmetụta na-ọchịchọ, onye ọrụ ahụ.
Uche uche bu ihe a na-ekwu dika uche, ma obu amamihe. Ọ bụ ọrụ nke mmetụta na-ọchịchọ dị ka onye na-akwagharị nke anụ ahụ, dị ka onye ọrụ nke igwe mmadụ, na ya mere a na-akpọ ebe ahụ uche. Ọ bụ naanị uche nke a na-arụ ọrụ na nke na-arụ ọrụ na oge na uche site na uche. Ya mere, ọ bụ ngwá ọrụ nke onye ọrụ ahụ maara ma nwee ike ime ihe na n'ime na site na ihe gbasara ụwa nkịtị.
Mmetụta uche na ọchịchọ uche bụ ịrụ ọrụ nke mmetụta na nke ọchịchọ n'agbanyeghị na ma ọ bụ n'ihe gbasara ụwa nkịtị. Uche abuo a na-abanye n'ime ya ma na-edozi ma na-edo onwe ya n'okpuru. Ya mere, a na-eche echiche nile nke mmadụ ka o kwekọọ n'echiche nke uche, nke na-ejikọta onye ọrụ ahụ n'àgwà ma gbochie iche echiche onwe ya dịka ihe dị iche n'anụ ahụ.
Ihe a na-akpọ psychology bụ nke a taa abụghị sayensị. A kọwawo nkà mmụta mmekọrịta n'oge a dị ka ọmụmụ banyere àgwà ụmụ mmadụ. A ghaghị ime nke a iji gosi na ọ bụ nyocha nke mmetụta site na ihe na ikike nke ọdịdị nke sitere n'echiche ndị dị na usoro mmadụ, na nzaghachi nke usoro mmadụ iji nweta mmetụta ndị a natara. Ma nke ahụ abụghị nkà mmụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Enweghi ike inwe udiri uche dika ndi sayensi, rue mgbe enwere ihe omuma nke ihe psyche bu, na ihe uche bu; na mmezu nke usoro echiche, nke uche na-arụ ọrụ, yana ihe na-akpata na nsonaazụ ya. Ndị ọkà mmụta sayensị kwetara na ha amaghị ihe ihe ndị a bụ. Tupu umuaka mmadu enwee ike ibu ezi sayensi, aghagh ighota uzo ozo nke ndi mmadu ato. Nke a bụ ntọala nke a pụrụ ịzụlite ezi sayensị nke uche na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Na ibe ndị a, a na-egosi otú mmetụta na ọchịchọ si emetụta ndị nwoke na nwanyị, na-akọwa na nime nwoke, mmetụta na-achịkwa ọchịchọ na na n'ime nwanyị, ọchịchọ ahụ na-achịkwa mmetụta; nakwa na n'ime mmadụ ọ bụla, ịrụ ọrụ nke ụbụrụ na-achị ugbu a na-esikarị na-anabata otu ma ọ bụ nke ọzọ, dị ka mmekọahụ nke ahụ ha na-arụ ọrụ; a gosiputara na n'ihu, na mmekọrịta nile mmadụ na-adabere n'ịrụ ọrụ uche nke ndị ikom na ndị inyom na mmekọrịta ha na ibe ha.
Ndị ọkà mmụta akparamàgwà mmadụ nke oge a na-ahọrọ ịghara iji okwu ahụ bụ mkpụrụ obi mee ihe, ọ bụ ezie na ọ bụ nke a na-ejikarị eme ya n'asụsụ Bekee ruo ọtụtụ narị afọ. Ihe kpatara nke a bu na ihe nile ekwuru banyere ihe nkpuru obi bu ma obu ihe o mere, ma obu ebum n’uche o na-eje, abughi ihe doro anya, nwe obi abuo ma dikwa mgbagwoju anya, ka o wee kwado ihe omumu sayensi banyere okwu a. Kama nke ahụ, ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ ewerewo ya dị ka isi okwu nke ọmụmụ ha igwe mmadụ na agwa ya. Ọ dịwo anya ndị mmadụ ghọtara ma kwenye n'ozuzu ya, Otú ọ dị, mmadụ mejupụtara "ahụ, mkpụrụ obi, na mmụọ." Ọ dịghị onye na-enwe obi abụọ na ahụ bụ anụmanụ anụmanụ; ma gbasara mụọ na mkpụrụ-obi enweela ọtụtụ amaghị-ama na ịkọ nkọ. Akwụkwọ a doro anya n'isiokwu ndị a dị mkpa.
Akwụkwọ ahụ gosiri na mkpụrụ obi dị ndụ bụ eziokwu ma bụrụkwa eziokwu. O gosiputara na ebum n’uche ya na oru ya di nnukwu nkpa na atumatu uwa dum, na odighi ebibi ya. A kọwara na nke ahụ a na-akpọ mkpụrụ obi bụ ihe okike unit - elemental, unit of element; na ihe omuma a ma enweghi uche bu ihe kachasi elu nke ihe okike nile di n'ime aru: o bu ihe ndi mejuputara n'ime aru, ebe ha enweela oru na oru ha mgbe ha mutaworo otutu oru di otutu. gụnyere ọdịdị. Ebe ọ bụ na nchikota nke iwu niile nke okike, ngalaba a tozuru oke ịrụ ọrụ dị ka onye isi njikwa na-akpaghị aka nke ọdịdị na usoro mmadụ; dịka otua ọ na-ejere onye ahụ na-anaghị anwụ anwụ ozi site na ihe niile dị adị ọzọ site na oge ọ na-ewu ahụ ọhụrụ nke anụ ahụ maka onye na-eme ya abata, na idozi na idozi ahụ ahụ ogologo oge ọdịnihu nke onye na-eme ihe ahụ nwere ike ịchọ, dịka onye kpebiri si kpebie. na-eche echiche.
A na-akpọ unit a ụdị ume ume. Akụkụ ahụ na-arụ ọrụ nke ume ume bụ ume; ume bụ ndụ, mmụọ, nke ahụ; ọ na-agụnye usoro ahụ dum. Akụkụ nke ọzọ nke ụdị ume ahụ, akụkụ ahụ dị oke, bụ ụdị ma ọ bụ ihe nlereanya, ụkpụrụ, ihe ọkpụkpụ ahụ, dịka a na-esi arụpụta akụkụ ahụ dị n'ime ahụ, na-ahụ anya site na ime ume. Ya mere akụkụ abụọ nke ụdị ume ume na-anọchi anya ndụ na ọdịdị, site na nke ọdịdị dị.
Ya mere ekwuputara na madu nwere aru, nkpuru obi, na mo nke madu dika ihe putara na aru aru bu ihe ojo; na mmụọ bụ ndụ nke ahụ, ume ndụ, ume ndụ; nakwa na mkpụrụ obi bụ ụdị n'ime ahụ, ihe a na-apụghị imeri emeri, nke a na-ahụ anya; na nke a na mkpụrụ obi dị ndụ bụ mkpụrụ ndụ nke na-adịgide adịgide, na-arụgide, na-arụzi, ma na-ewughachi ahụ mmadụ.
Mkpụrụ ume, na ụfọdụ akụkụ nke arụ ọrụ ya, gụnyere ihe nke nkà mmụta uche na-akpọ echiche ndị na-enweghị isi, na amaghị ihe ọ bụla. Ọ na-achịkwa usoro ụjọ ụjọ. N'ime ọrụ a, ọ na-arụ ọrụ dị ka echiche nke ọ na-enweta site na okike. Ọ na-ebukwa mmegharị ahụ nke onwe ahụ, dịka atụmatụ nke onye na-ahụ maka ọrụ na-eche. Ya mere, ọ na - arụ ọrụ dịka ihe ntanye n'etiti ọdịdị na anwụghị anwụ na - adịghị ahụ n'ahụ; otu onye na-agbanyeghị aka na-azaghachi mmetụta nke ihe na ikike nke ọdịdị, na echiche nke onye ọrụ ahụ.
Ahụ gị bụ nsonaazụ nke echiche gị. Ihe ọ bụla ọ nwere ike igosipụta ahụike ma ọ bụ ọrịa, ị na-eme ya site na iche echiche na mmetụta na agụụ. Ahụ gị dị ugbu a bụ ngosipụta nke mkpụrụ obi gị na-adịghị emebi emebi, ọdịdị nke iku ume gị; ya bu nkpachapu echiche nke otutu ndu. Ọ bụ ndekọ a na-ahụ anya nke echiche gị na omume gị dị ka onye na-eme ihe, ruo ugbu a. N’eziokwu a, izizi nke ozuzu oke na anwụghị anwụ nke ahụ.
Obu ihe di iche nke di iche iche ugbua n'echiche bu na mmadu gabu aru nke nadigh anwu; na ọ ga-emesị nwetaghachi ọnọdụ nke izu okè nke o si daa. Ụdị nkuzi dị otú a dị iche iche dị na West maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku afọ abụọ. N'oge ahụ, ọ gbasaa n'ụwa nke mere na ọtụtụ narị nde ndị na-eme ihe, na-adị n'ụwa ọzọ kemgbe ọtụtụ narị afọ, abụrụla ndị na-emetụtaghachi echiche ahụ dị ka eziokwu zuru ezu. Ọ bụ ezie na ọ ka dị ntakịrị nghọta banyere ya, ma ka na-echeghị banyere ya; ọ bụ ezie na ọ gbagọrọ agbagọ iji gboo mmetụta na ọchịchọ nke ndị dị iche iche; ọ bụ ezie na enwere ike iche ya taa na enweghị mmasị, ike, ma ọ bụ egwu, echiche ahụ bụ akụkụ nke usoro echiche zuru ụwa ọnụ nke oge a Humanity, ya mere ọ dị mkpa ichebara echiche nke ọma.
Otú ọ dị, okwu ụfọdụ dị n'akwụkwọ a, ọ ga-abụrịrị ihe dị ịtụnanya, ọbụna kediegwu, ruo mgbe e nyere ha echiche zuru ezu. Dị ka ọmụmaatụ: echiche bụ na ahụ mmadụ nwere ike ime ka ọ ghara ire ure, ruo mgbe ebighị ebi; nwere ike weghachite ma weghachite ya na nke zuru okè na ndu ebighi ebi nke onye oru ahu meworo ka o daa n'oge gara aga; na, n'ihu, echiche bụ na ọnọdụ nke izu okè na ndụ ebighi ebi ga-enweta, ọ bụghị mgbe ọ nwụsịrị, ọ bụghị n'ebe dị anya dị njọ n'oge na-adịghị anya, kama na ụwa nkịtị mgbe otu dị ndụ. Nke a nwere ike iyi ihe dị nnọọ iche, mana mgbe a nyochachara ya nke ọma, ọ gaghị egosi na ọ bụ ezi uche.
Ihe na-enweghị ezi uche bụ na ahụ mmadụ ga-anwụrịrị; ihe ozo na-adighi ezi uche bu na o bu nani site n'onwu na onye ahu nwere ike idi ndu ebighebi. Ndị ọkà mmụta sayensị na-ekwu na n'oge na-adịghị anya na ọ dịghị ihe mere ndụ nke ahụ ekwesịghị ịgbatị ruo mgbe ebighị ebi, ọ bụ ezie na ha anaghị atụ aro otu a ga - esi mezuo nke a. O doro anya na ọ bụ mgbe niile ka mmadụ na-anwụ anwụ; ma ha na-anwụ naanị n'ihi na ọ dịghị mgbalị ọ bụla e mere iji mee ka ha dịghachi ndụ. N'akwụkwọ a, n'isiakwụkwọ bụ The Great Way, a na-ekwupụta otú a pụrụ isi mee ka ahụ dịghachi ndụ, a ga-eweghachi ya n'ọnọdụ zuru okè ma bụrụ ụlọ nsọ maka Triune Self kpamkpam.
Ike nwoke na nwanyị bụ ihe omimi ọzọ nke mmadụ ga-edozi. Okwesiri ibu ngozi. Kama nke ahụ, mmadụ na-esikarị n'ime ya onye iro ya, ekwensu ya, na-anọnyere ya oge niile nke ọ na-agaghị agbanahụ. Akwụkwọ a na-egosi otu, site na iche echiche, iji ya dịka ike dị ukwuu maka ihe ọma nke ọ kwesịrị ịbụ; na otua site na nghota na njide onwe onye imeghari aru ma mezuo ebumnuche na ebumnuche ya na ogo nke oganiru.
Mmadu obula bu ihe omimi abuo: ihe omimi nke onwe ya, na ihe omimi nke aru o no n'ime ya. O nwere ma obu ogodo na ugha nke ihe omimi abuo. Ahụ bụ mkpọchi, ọ bụkwa ya bụ isi n’ime mkpọchi ahụ. Ebumnuche nke akwụkwọ a bụ ịgwa gị otu ị ga-esi ghọta onwe gị dị ka isi ihe omimi nke onwe gị; otu esi achọta onwe gị n'ime ahụ; otu esi achọta ma mara ezigbo Onwe gị dịka ịmara onwe gị; otu esi eji onwe gi dika igodo imeghe mkpọchi nke bu aru-gi; na, site na aru gi, otu esi agh ota ma mara ihe omimi nke okike. Are na-na na na ọrụ nke, onye ahu igwe nke uwa; ọ na-eme ma na-emeghachi omume na na n'ihe metụtara okike. Mgbe ị na-edozi ihe omimi nke onwe gị dị ka onye na-eme ihe Ọmụma nke Onwe gị na onye na-arụ ọrụ nke igwe gị, ị ga - amata - na nkọwa ọ bụla na kpamkpam - na ọrụ nke nkeji nke ahụ gị bụ iwu nke okike. Ga-ahụ mara nke ọma dị ka nke amaghị iwu nke okike, na-enwe ike na-arụ ọrụ kwekọrọ na oké uwa igwe site na ya onye ahu igwe nke ị na-.
Ihe omimi ọzọ bụ oge. Oge dị ugbu a dị ka isiokwu nkịtị nke mkparịta ụka; ma mgbe mmadụ gbalịrị iche echiche banyere ya ma kọwaara ya ihe ọ bụ n'ezie, ọ na-aghọ ihe nkịtị, amaghị ama; enweghi ike ijide ya, otu adighi aghota ya; ọ na-efunahụ, na-agbapụ, ma ọ karịrị otu. Ihe a na-akọwabeghị.
Oge bụ mgbanwe nkeji, ma ọ bụ nke ọtụtụ nkeji, na mmekọrịta ha na ibe ha. Nkọwa a dị mfe na-emetụta ebe niile na n'okpuru steeti ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla, mana ọ ga-echebara ma tinye ya n'ọrụ tupu mmadụ enwee ike ịghọta ya. Onye na-eme ihe aghaghi ighota oge mgbe o no n'ime aru, teta. Oge yiri ka ọ dị iche na ụwa na steeti ndị ọzọ. Nye onye na-eme ihe maara oge ọ dị ka ọ gaghị abụ otu mgbe ịmụrụ anya dị ka ọ nọ na nrọ, ma ọ bụ mgbe ị nọ n'oké ụra, ma ọ bụ mgbe ahụ nwụrụ, ma ọ bụ mgbe ị na-agafe na-esote ọnwụ, ma ọ bụ mgbe ị na-eche ụlọ na ọmụmụ nke ahụ ọhụrụ ọ ga-eketa n’ụwa. Oge nke ọ bụla nwere oge “Na mbido,” usoro na njedebe. Oge na-adighi ka iri ari na nwata, gbara oso na ntorobia, na agbaru ososo rue mgbe mmadu nwuru.
Oge bụ ntanetị nke mgbanwe, nke a kpara site na mgbe ebighi ebi na ahụ mmadụ na-agbanwe agbanwe. Omkpa ákwà-ichi-web nke ikpa-ya di ka ume-aru. Uche-aru bu onye mebere na onye na aru oru ya, ya na ya, ma obu onye na-acho uzo. Iche echiche na-eme ka oge dị mfe, na-eche echiche na-eme ka oge na-aga, na-eche echiche na-ekpuchi ákwà mkpuchi nke oge; na ahụ-uche na-eme echiche.
IJI NZUO bu ihe omimi ozo, nke kachasi uku ma burukwa ihe omimi nile. Okwu a maara amara bu ihe puru iche; ọ bụ mkpụrụokwu bekee kepụtara; ihe nhata ya apụtaghị na asụsụ ndị ọzọ. Enweghi ekele maka uru ya na ihe niile dị mkpa. A ga-ahuta nke a n'ime ojiji ejiri mee okwu ahu. Iji nye ụfọdụ ihe atụ a na-ahụkarị nke iji ya eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi: A na-anụ ya n'okwu ndị dị ka "nsụhọ m," na "nghọta mmadụ"; na n’ihe dịka ịmụrụ anụmanụ, ịmara mmadụ, anụ ahụ, nke ọgụgụ isi, mbara igwe, na ụdị mmụọ ndị ọzọ. Ọ na-kọwara dị ka nsụhọ nkịtị, na ukwuu na miri, na elu na ala, n'ime na elu, nsụhọ; na omuma zuru oke. A na-anụkwa banyere mbido nke nghọta, na mgbanwe nke mmụọ. Otu na-anụ ka ndị mmadụ na-ekwu na ha enwego ma ọ bụ kpatara uto, ma ọ bụ mgbatị, ma ọ bụ mmụba, nke mmụọ. Miszọ eji eme ihe n’ụzọ na-ezighị ezi nke okwu a bụ na nkebi ahịrịokwu dịka: ifelata uche, ijigide uche; iji nwetaghachi, iji, ịzụlite uche. Na onye na-anụ, ọzọ, nke steeti dị iche iche, na ụgbọ elu, na ogo, na ọnọdụ nke nsụhọ. Consmara dị oke oke iji ruo eru, oke, ma ọ bụ edepụtara ya. N'ihi nkwanye ugwu maka akwụkwọ a, eji ahịrịokwu a: ịmara, ma ọ bụ dịka, ma ọ bụ n'ime. Iji kọwaa: ihe ọ bụla maara ihe maara ihe ụfọdụ, ma ọ bụ dịka ọ bụ, ma ọ bụ mara na ụfọdụ. ogo nke ị maara.
Ịmara bụ ihe kachasị, Eziokwu ikpeazụ. Amamihe bụ na site na ọnụnọ nke ihe niile maara. Mystery nke ihe omimi nile, ọ karịrị nghọta. N'ebe ọ na-enweghị ihe ọ bụla nwere ike ịma; ọ dịghị onye nwere ike iche; enweghị, ọ dịghị ikike, enweghị ike, enweghị njikọ, nwere ike ịrụ ọrụ ọ bụla. Ma amam-ihe adighi-eme ọlu: ọ dighi-eme ihe ọ bula; ọ bụ ọnụnọ, n'ebe nile. Ma ọ bụ n'ihi ọnụnọ ya na ihe niile maara nke ọma na ogo ọ bụla ha maara. Amamihe abụghị ihe kpatara ya. Enweghị ike ịkpali ma ọ bụ jiri ya ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla emetụta. Amamihe abụghị ihe ọ bụla, maọbụ ọ dabere n'ihe ọ bụla. Ọ dịghị abawanye ma ọ bụ belata, gbasaa, gbasaa, nkwekọrịta, ma ọ bụ mgbanwe; ma ọ bụ dị iche n'ụzọ ọ bụla. Ọ bụ ezie na e nwere ogo dịgasị iche iche n'amaghị ama, ọ dịghị ọkwa dị iche iche nke Ịmara: ọ dịghị ụgbọelu, ọ dịghị mba; enweghị akara, nkewa, ma ọ bụ ọdịiche nke ụdị ọ bụla; ọ bụ otu ebe ahụ, na n'ihe niile, site na njirimara nke ụwa na ọgụgụ isi. Amamihe enweghị ihe ọ bụla, enweghị àgwà, enweghị àgwà; ọ naghị enweta; o nweghi ike inweta ya. Amamihe amaghi mmalite; ọ pụghị ịkwụsị ịbụ. Ịmara bụ.
Na ndu gi nile n’uwa n’achoghi anya ichota, icho anya ma obu icho onye ma obu ihe efu. V na-eche n’echiche na ọ bụrụ na ị ga - achọta ihe ahụ na - agụ gị agụụ, ị ga - enwe afọ ojuju na afọ ojuju. Obere ihe ncheta nke afọ na-aga elu; ha bụ mmetụ dị ugbu a banyere oge gara aga ị chefuru echefu; ha na-amanye ike ọgwụgwụ ụwa na-ada oge niile na-agagharị nke ahụmịhe na enweghị isi na enweghị isi na mbọ mmadụ. Nwere ike ịchọ imeju afọ ahụ site n'ezinụlọ, site na ịlụ di na nwunye, site na ụmụ, n'etiti ndị enyi; ma ọ bụ, n'achụmnta ego, akụnụba, njem, nchọpụta, ebube, ikike na ike - ma ọ bụ ihe nzuzo ọ bụla a chọpụtabeghị n'obi gị. Ma ọ dịghị ihe ọ bụla nke uche nwere ike imeju agụụ a. Ihe kpatara ya bụ na ị furu efu - bụ akụkụ furu efu ma bụrụ nke na-enweghị ike ịpụpụ iche nke Onwe Gị nke na-adịghị anwụ anwụ. Afọ ole na ole gara aga, gị, dịka mmetụta na agụụ, akụkụ onye na-eme ya, hapụrụ onye na-eche echiche na onye maara akụkụ nke Onwe Gị Atọ. Yabụ na-efunahụ gị onwe gị n'ihi na, n'emeghị nghọta ọ bụla banyere Atọ n'Ime Otu gị, ị nweghị ike ịghọta onwe gị, agụụ gị, na ịbụ onye furu efu. Ya mere, owu nọrọ gị mgbe ụfọdụ. Chefuola ọtụtụ akụkụ ị na-egwuri egwu n’ụwa a, dịka mmadụ; ma i chefuola ezigbo ịma mma na ike nke ị maara mgbe gị na onye na-eche echiche gị na onye maara ihe na mpaghara nke adịgide. Ma gị, dịka onye na-eme ihe, na-achọ njikọta ziri ezi nke mmetụta na ọchịchọ gị n'anụ ahụ zuru oke, ka ị wee soro onye na-eche echiche gị na onye maara akụkụ, dị ka Onye atọ n'ime Onwe, na mpaghara nke adịgide. N'ihe odide oge ochie enwere echiche banyere ọpụpụ ahụ, na nkebi ahịrịokwu ndị dị ka "mmehie mbụ," "ọdịda mmadụ," dị ka site na steeti na mpaghara nke mmadụ nwere afọ ojuju. Ọnọdụ na ala-eze nke ịpụ apụghi ịkwụsị; ndị dị ndụ nwere ike nwetaghachị ya, mana ọbụghị n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ.
Ọ dịghị mkpa ka ị chee na ọ bụ naanị gị. Onye na-eche echiche na onye maara gị nọ gị. N'elu oké osimiri ma ọ bụ n'oké ọhịa, n'ugwu ma ọ bụ dị larịị, na ìhè anyanwụ ma ọ bụ onyinyo, na ìgwè mmadụ ma ọ bụ na nzuzo; ebe ọ bụla ị nọ, echiche gị na ịmara onwe gị na gị. Onye gị onwe gị ga-echebe gị, dịka ị ga-ahapụ onwe gị ka echebe gị. Onye na-eche echiche na onye maara gị dị njikere maka nloghachi gị, ma ogologo oge ọ nwere ike ịchọta ịchọta ma soro ụzọ ahụ ma bụrụ onye ọzọ na-echekwa n'ụlọ ha dịka Triune Self.
Ka ọ dị ugbu a, ị gaghị adị, ị gaghị enwe, afọ ojuju na ihe ọ bụla na-erughị Ọmụma onwe onye. Gị onwe gị, dịka mmetụta-na-ọchịchọ, bụ onye na-ahụ maka ọrụ nke atọ gị; na site na ihe ị meere onwe gị dị ka ọdịnihu ị ghaghị ịmụta ihe abụọ dị mkpa nke ahụmahụ niile nke ndụ ga-akụzi. Ihe omumu ndia bu:
Ihe a ga-eme;
Ihe agaghị eme.
Nwere ike ịhapụ ihe mmụta ndị a maka ndụ niile masịrị gị, ma ọ bụ mụta ha ozugbo ị chọrọ - nke ahụ bụ ka ị kpebie; ma ka oge na-aga, ị ga-amụta ha.
Echiche na Mbibi ➔
Onye chepụtara ➔
Okwu Foundation, Inc. | Ndị na-edepụta echiche na ntinye
ebe ọ bụ na 1950
Họrọ asụsụAfrikaansAfsoomaaliAzərbaycan diliBahasa IndonesiaBahasa MelayuBasa JawaBasa SundaBosanskiCatalàCebuanoČeština‎ChichewaCorsuCymraegDanskDeutschEestiEnglishEspañolEsperantoEuskaraFilipinoFrançaisGaeligeGàidhligGalegoHarshen HausaHmongHrvatskiIgboisiXhosaÍslenskaItalianoKiswahiliKreyol ayisyenLatviešu valodaLietuvių kalbaMagyarMalagasyMalteseNederlandsNorsk bokmålŌlelo HawaiʻiO‘zbekchaPolskiPortuguêsRomânăSesothoShonaShqipSlovenčinaSlovenščinaSuomiSvenskaTe Reo MāoriTiếng ViệtTürkçeYorùbáZuluΕλληνικάБеларуская моваБългарскиҚазақ тіліКыргызчаМакедонски јазикМонголРусскийСрпски језикТоҷикӣУкраїнськаՀայերենქართულიአማርኛיידישעִבְרִיתاردوالعربيةسنڌيفارسیكوردی‎پښتوनेपालीमराठीहिन्दीবাংলাਪੰਜਾਬੀગુજરાતીதமிழ்తెలుగుಕನ್ನಡമലയാളംසිංහලไทยພາສາລາວဗမာစာ한국어ភាសាខ្មែរ日本語简体中文繁體中文